TLEE Spas dia namoaka tetikasa farany: Willowbrook Spa ao amin'ny The Lake House any Canandaigua
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » TLEE Spas dia namoaka tetikasa farany: Willowbrook Spa ao amin'ny The Lake House any Canandaigua
Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fivoriana • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Willowbrook Spa ao amin'ny The Lake House any Canandaigua
TLEE Spas, orinasam-pampandrosoana spa ekena eran'izao tontolo izao miaraka amina endriny manan-talenta amin'ny fahaizan'ny olona mandray vahiny, dia omena voninahitra hanala sarona ny Willowbrook Spa, izay vao nanomboka tao amin'ny The Lake House on Canandaigua, trano fandraisam-bahiny sy spaoro nomen'ny mponina am-pitoerana eo amin'ny rantsan-tànana mahavariana. Faritra farihy any New York. Ny toera-pitsaboana vaovao dia mahazo aingam-panahy avy amin'ny toerana amoron-dranomasina malaza sy ny hakanton'ny Finger Lakes tsy voasivana, nalaza noho ny fahitana farihy mendrika an'ireo farihy sy havoana mihodinkodina ary faritra fambolena manan-karena amin'ny tantara eo an-toerana.
Ny toera-pitsaboana vaovao dia mamerina sy manome aingam-panahy amin'ny saotra mivalampatra sy ny fitsaboana namboarina.
Nahazo fankasitrahana tao amin'ny List Hot's Condé Nast Traveler 2021 ny Lake House ho anisan'ireo vaovao tsara indrindra: hotely manerantany, hotely maharitra eto an-tany, hotely any Etazonia sy Kanada, ary hotely momba ny natiora manerantany.
Willowbrook Spa dia mameno ny fiovan'ny hotely amin'ny alàlan'ny fidirana mivantana amin'ny zaridaina maitso, amoron-dranomasina milamina ary fitsaboana.
Rehefa nosokafana ny The House House tamin'ny fahavaratra lasa teo, nandritra ny areti-mandringana COVID-19, ny fiverenana mitsangatsangana isam-paritra sy ny fizahan-tany miadana kokoa dia niteraka buzz lehibe ho an'ny trano, izay mifamezivezy voajanahary ao anaty sy ivelan'ny trano ary mamorona lohataona mahafinaritra ho fahatsiarovana mandrakizay. Nisongadina vao haingana tao amin'ny Travel + Leisure's It List 2021, safidy hotely vaovao tsara indrindra eran'izao tontolo izao, ny The House House dia nahazo fankatoavana ihany koa tao amin'ny Hot List Condé Nast Traveler 2021 ho isan'ireo hotely vaovao tsara indrindra eran'izao tontolo izao, vaovao vaovao maharitra trano fandraisam-bahiny manerantany, hotely vaovao tsara indrindra any Etazonia sy Kanada, ary trano fandraisam-bahiny vaovao tsara indrindra manerantany. Manaraka ny tontolo voajanahary mahafinaritra, Willowbrook Spa, mameno ny hatsaran'ny hotely mahafinaritra sy mora alaina amin'ny fidirana mivantana amin'ny zaridaina maitso sy amoron-dranomasina milamina, ary ny fitsaboana mifanaraka amin'ny tanjon'ny fahasalamana.
"Willowbrook Spa dia niverina tamin'ny fisehoana an-tsary ny fankalazana ny fifandraisan'olombelona, ​​ny fiainana miadana kokoa ary ny traikefa an-kalamanjana," hoy i Lee. "Manatsara ny filôzôfia eto an-toerana sy ny fifandraisana amin'ny tontolo voajanahary izahay amin'ny alàlan'ny famolavolana spa, vokatra mandaitra mahomby ary serivisy atosiky ny valiny."
Mampifangaro ny fitaomana - ao anatin'izany ny fomba fiaina misy ny divay sy ny zava-kanto mahandro - Willowbrook Spa dia lohataona voajanahary ho an'ny fahasalamana amin'ny endrika maro, manomboka amin'ny hetsika feno fahatsiarovan-tena ao anatin'ny tontolo milamina ka hatramin'ny fitsaboana any ivelany sy ny fialan-tsasatry ny faran'ny herinandro. Satria ny faritra Finger Lakes dia fantatra ihany koa ho faritra divay lehibe indrindra amin'ny morontsiraka atsinanan'i Etazonia, TLEE Spas nijery faritra iray fantany tsara, firenena divay any California, ary nampidirina ireo singa izay nanampy tamin'ny famaritana an'io fomba fiainana tsy manam-paharoa io amin'ny traikefa spa vaovao. Ny Sun Room dia tontolon'ny efitrano fandraisam-bahiny izay ahitana hazavana voajanahary, fikorianan'ny rivotra madio, ary fomba fijery manentana mankamin'ny Spa Garden, izay misy zaridaina spaoro miisa telo miaraka amin'ny fandroana ivelany sy ireo faritra fialan-tsasatra izay misy fandroana siramamy fandroana al fresco. ho an'ny olona, ​​mpivady na vondrona kely. Ao anatin'ny tontolo manodidina azy, safidy seza maro no manitatra ny traikefa amin'ny efitrano fandraisam-bahiny mankeny ivelany, manome toerana feno aingam-panahy ho an'ny fisaintsainana na fiangonana ara-tsosialy azo antoka.
Nahazo aingam-panahy ny lova ara-pambolena manan-karena ao amin'ny faritra, izay nahatonga ny famerenana amin'ny laoniny ny fambolena kininina kilasy eran-tany sy ny famerenana amin'ny laoniny ny fitsaboana voajanahary voajanahary, Willowbrook Spa dia mampiasa fanafody zavamaniry hampiroborobo ny fahasalamana amin'ny ankapobeny ary misy soroka famelombelona avo lenta hampiakatra ny traikefa vahinin'ny vahiny. Tsotra sy voadinika tsara, ny menio spaao dia manolotra traikefa iray isan-karazany, ao anatin'izany ny fitsaboana amin'ny alikaola amin'ny alàlan'ny fivoriana sy ny fanorana fanasoavana ny sonia ilay trano izay mampifangaro teknika voarindra miaraka amin'ny menaka ampidirina amin'ny raokandro sy ireo fanafody momba ny lohahevitra mba hamenoana ny faharanitan-tsaina ananan'ny mpitsabo. Amin'ny alàlan'ny tolotra serivisy isan-karazany izay manintona ny mitovy amin'ny olon-dehibe sy ny maty, Willowbrook Spa dia manasa ny vahiny hanatsara ny fomba fiainany manankarena amin'ny alàlan'ny fihenam-bidy, famerenana indray ary famerenana amin'ny moron-tsiraka manandratra ny Farihin'i Canandaigua amin'ity fahavaratra sy fararano ity.
Ho fanampin'ny Willowbrook Spa, TLEE Spas dia namolavola fandaharana vao haingana ho an'ny The Seawater Spa ao amin'ny Montauk Resort an'i Gurney, izay nalahatra hisokatra ny faran'ny 2021 amin'ny faran'ny atsinanan'ny Long Island. Ny TLEE Spas dia nifantoka tamin'ny fametrahana ny maodelin'ny fahasalamana amin'ny fantsakana manokana an'ny ranomasina sy ny toerana misy azy amoron-dranomasina, toerana iankinan'ny rano manankarena mineraly sy ny rivotra mifangaro sira. Willowbrook Spa ao amin'ny The Lake House sy The Seawater Spa ao amin'ny Gurney's Montauk dia handray anjara toerana lehibe amin'ny fampisondrotana ny traikefa amin'ny fahasalamana any amin'ny faritry ny farihy sy ny morontsiraka tsirairay avy, manasa ny vahiny hanao fifandraisana amin'ny natiora ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana manavao endrika misy endrika mampiavaka ny tranokala sy ny toerana manodidina. .
Momba ny Spas TLEE
TLEE Spas dia mitondra ambaratongam-pitiavam-bavaka tsy manam-paharoa, matihanina ary mampifanaraka ny famoronana spaoro miavaka sy traikefa momba ny fahasalamana. Manakaiky ny tetik'asa tsirairay izy ireo amin'ny maso vaovao, mitady fomba hampiakarana ny bara sy hanokanana azy, miaraka amina rakitsoratry ny fahombiazana amin'ny alàlan'ny fanangonana tetik'asa nahazo loka, ireo mpanjifa mahay manavaka ary marika malaza. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny TLEE Spas, tsidiho www.ranbables.com .